रोचक संसार – NepalayaNews.com
यी दुई राशि हुनेको कहिल्यै सफल हुँदैन प्रेम र विवाह ! १ चैत्र २०७७, आईतवार १५:२९
पुरुषको भाग्य चम्काउने युवतीमा हुन्छन् यस्ता लक्षण ? १२ माघ २०७७, सोमबार १५:३५
शास्त्रमा लेखिएको छ की तलका गुणहरु भएका कन्यासँग संगत (बिवाह) गर्ने पुरुष असाध्यै भाग्यमानी हुन्छन् । यस्ता कन्या विवाहपछि घर भित्रिँदा हरेक पुरुषको भाग्य खुल्छ र घरमा लक्ष्मीको बास हुने यो शास्त्रमा लेखिएको छ । – कान तथा ओठमा कोठी छ भने त्यस्ता कन्या..
अमेरिकामा ६१ वर्षीया महिलाले जन्माइन् आफ्नै छोराको वीर्यबाट नातिनी! २० मंसिर २०७७, शनिबार १५:०१
अमेरिकामा ६१ वर्षीया महिलाले शिशुलाई जन्म दिएकी छन्। अमेरिकाको नेब्रास्काकी ६१ वर्षीया सिसिल इलेजले आफ्नै कोखबाट शिशु (नातिनी)लाई जन्म दिएकी हुन्। ६१ वर्षीया सिसिलले आफ्ना समलिंगी छोरा म्याथ्यु इलेजको परिवार बसाउने क्रममा विश्वमै नयाँ इतिहास रचेकी हुन्। उनी..
५१ वर्षीया महिलाले जन्माइन् नातिनी! २६ कार्तिक २०७७, बुधबार १४:४७
अमेरिकामा ५१ वर्षीया एक महिलाले नातिनिलाई जन्म दिएकी छिन् । जुली लोभिंगले नोभेम्बर २ मा इलिनोइस अस्पतालमा एक स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिएकी हुन् । आफ्नी छोरी ब्रेना लकवुडका लागि उनले एक स्वस्थ बच्चाको जन्म दिएकी हुन् । नवजात शिशुको नाम ब्रायर जुलियट लकवुड..
यी हुन विश्वकै सबैभन्दा लामो खुट्टा भएकी युवती २१ आश्विन २०७७, बुधबार १५:१७
अमेरिकाकी एक १७ वर्षीया युवतीको खुट्टा विश्वकै सबैभन्दा लामो खुट्टा रुपमा रेकर्ड भएको छ । टेक्ससमा बस्ने मैका क्यूरिन नामकी युवतीको खुट्टाको लम्बाई करिब डेढ मिटर रहेको र उनको नाम गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता भएको छ । लम्बाई ६ फिट १० इन्च लम्बाइ..
जान्नुहोस्, कुन छालालाई कस्तो रङको ड्रेस सुहाउँछ ? २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार १५:०६
दसैँ नजिकिँदै छ । बजारमा ड्रेस किन्नेको भिडभाड बढ्दै छ । बजार घुम्दा डमीलाई लगाएका सोपिस सबै राम्रो भएजस्तो देखिन्छ र किन्न मन लाग्छ । बजारमा अरू कसैले लगाउँदा सुहाएको लुगामा पनि मन आकर्षित हुन्छ । आफूलाई पनि सुहाउला भनेर किन्ने गरिन्छ । तर, फेसन डिजाइनरहरू..
अनुसन्धान भन्छ– जेठो सन्तान जस्तो बौद्धिक अरु हुँदैनन् ! ७ भाद्र २०७७, आईतवार १५:१२
के तपाईं घरको जेठो सन्तान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईं लागि खुसीको खबर छ । केही समय अघि मात्र गरिएको अध्ययन अनुसार, कुनैपनि परिवारको जेठो सन्तान हुनुका फाइदा धेरै छन् । जर्मनस्थित लिपजिग युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्ययन अनुसार, परिवारको..
दाह्री पाल्नुका फाईदै फाइदा, लाग्दैनन् यी घातक रोग ! ३२ श्रावण २०७७, आईतवार १५:४१
स्कूल कलेज पढ्ने टिनएजर हुन् वा अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी, धेरैजसो पुरुषहरुमा अचेल दाह्री पाल्ने क्रेज बढिरहेको देखिन्छ । अधिकांश पुरुष आफूलाई स्टाइलिस देखाउनका लागि शौखको रुपमा दाह्री पाल्ने गर्दछन् तर दाह्रीका छुट्टै फाइदा पनि छन् जो थाहा पाउन सकिरहेका..
‘मोटा व्यक्तिलाई कोरोनाको जोखिम ज्यादा’ १९ श्रावण २०७७, सोमबार १५:४२
के तपाईंको तौल तुलनात्मक रूपमा ज्यादा छ ? यदि मोटोपनबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने तौल घटाउने प्रयत्न आजैबाट शुरु गर्नुहोला । कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको वर्तमान परिवेशमा बेलायती विज्ञहरूले मोटो या बढी तौल हुने मानिस कोरोना भाइरसको सम्पर्कमा पर्दा गम्भीर..
तपाईंलाई थाहा छ ? यी कुरा महिलाले पुरुषसँग सँधै लुकाउछन् १४ श्रावण २०७७, बुधबार १५:३५
सामान्यतया श्रीमान श्रीमतीबीच धेरै कुरा सेयर हुन्छ र हुनुपनि पर्छ । तर कतिपय कुराहरु यस्ता छन् जुन कुरा महिलाले सँधै पुरुष सँग लुकाउने गर्छन् । यस्ता छन् महिलाले पुरुषसँग लुकाउने कुरा : – बिहे हुनुभन्दा पहिले कति जना र को–को सँग शारीरिक सम्बन्ध थियो भन्ने..
विद्यार्थीबाट व्यवसायमा फड्को मार्दै एनआरएनतिर १ चैत्र २०७७, आईतवार १५:२९
एमाजनको २ अर्ब डलर बराबरको शेयर बिक्री १ चैत्र २०७७, आईतवार १५:२९
कोभिड विरोधी खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार छूट दिने अवधारणाको समर्थनमा अमेरिका १ चैत्र २०७७, आईतवार १५:२९